उपचार गर्ने रकम अभावमा छटपटाइ रहेका १६ वर्षीय श्याम वि क
प्रकाशित मिति : शनिबार, साउन ५, २०७५
सँगैका साथीहरू रमाइलो गर्दै विद्यालय गएको र खेलिरहेको दृष्य उनी ओछ्यानबाट नियाल्दै आँशुले सिरानी भिजाउँछन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ दमारगाँउ निवासी १६ वर्षीय श्याम विक पनि कुनैदिन त्यसैगरी साथीहरूसँग विद्यालय जान्थे । रमाइलो गर्दै, खेल्थे । उफ्रिन्थे । तर आज उनको त्यो अवस्था छैन।
स्थानीय नमूना महिला सामुदायिक वनमा आदर्श टोल विकास संस्थाको लागि श्याम दाउरा काट्न ६ महिनाअघि गएका थिए। तर दूर्भाग्य आफैंले काटेको रुखले उनलाई च्याप्यो। र उनको मेरुदन्ड नै भाँचिन पुग्यो।
आज उनी न बोल्न सक्छन् न उभिन नै। खाना खुवाउन घाँटीमा प्वाल पारिएको छ।
१६ वर्षीय श्याम विकको पछिल्लो अवस्था यही हो। श्यामका बुवा छैनन्। आमाको मानसिक स्थिति ठिक छैन। जसले गर्दा उनी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ दमारगाँउस्थित मामा घरको एउटा सानो कोठामा उपचार गर्ने रकम अभावमा छटपटाइ रहेका छन्। मृत्युसँग पैंठेजोरी खेलिरहेका छन्।
श्यामको हालसम्मको उपचार सामुदायिक वनले दिएको साढे तीन लाख रुपैयाँ र विभिन्न दाताहरूको सहयोगमा प्राप्त थप साढे दुई लाख रुपैयाँबाट सम्भव भएको हो। ६ महिना काठमाडौंमा राखेर उपचार गर्दा ६ लाख बढी खर्च भइसकेको छ। थप उचारका लागि रकम अभाव भएपछि श्यामलाई काठमाडौंबाट फिर्ता ल्याइएको छ।
श्यामको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले उनको थप उपचार आवश्यक रहेको भन्दा भन्दै रकम अभावमा श्यामलाई फिर्ता ल्याइएको हो। मामाघरको आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर छ। सामुदायिक वनले अब थप सहयोग गर्न पैसा नभएको बताएको छ। मामा दुर्गे विक स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिहरूसँग भान्जाको जीवन रक्षार्थ सहयोग माग्न गए । तर कतैबाट पनि सहयोग पाउन नसकेपछि उनी निराश भएर फर्किए।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ ले श्यामको उपचारमा सहयोग पुगोस् भनेर ३५ हजार सहयोग रकम दिने गरी पास भएको बताए पनि हालसम्म दुई हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको दुर्गे विकले जानकारी दिए।
सरकार र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि गरिबीकै कारण उपचार नपाएर कसैको मृत्यु हुन नदिने कुरा बताउँदै आएको छ। निर्वाचनका क्रममा यो नारा प्रचार गरिएको थियो। तर, श्याम विकको अवस्था दयनीय हुँदा समेत जनप्रतिनिधिले आश्वासन मात्रै दिँदै आएका छन् भने राज्यले उपचारका लागि एक रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराएको छैन।
कतैबाट सहयोग नपाउँदा जीवन रक्षाको याचना गर्दै आँशुले शिरानी भिजाउँदै विवश भएर उनी बाच्न बाध्य छन्।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार थप उपचार नपाए श्यामलाई जतिबेला पनि समस्या हुनसक्छ।
सुन्धारामा पानी ट्याङ्करले ठक्कर दिँदा एक महिलाको मृत्यु